टुप्पी भण्डारी बाट सर्प समात्ने भण्डारीको रुपमा परिचित – कदर न्यूज अनलाईन डिजिटल पत्रिका : Oneline Digital Kadarnews:
टुप्पी भण्डारी बाट सर्प समात्ने भण्डारीको रुपमा परिचित
३१ असार, काठमाडौं । बन्दाबन्दीले होटल व्यवसाय, पार्टी प्यालेस विगत चार महिनादेखि बन्द छन् । सञ्चालक र कर्मचारी कामविहीन छन् । उनीहरुलाई फुर्सदै फुर्सद छ तर भरतपुर महानगरपालिका ४ छहारी बसपार्क नजिकै रहेको पार्टी प्यालेस सञ्चालक यमलाल भण्डारीलाई भने भ्याई नभ्याई छ । उनको यो भ्याई नभ्याई पार्टी प्यालेसभन्दा भिन्न कामको लागि हो । कहीँ कतै सर्प देखियो भने उनलाई बोलाइन्छ । लकडाउनको समयमा मात्र उनले ६४ वटा सर्प समातेर नजिकैको जङ्गल क्षेत्रमा छोडे । ती मध्ये तीन वटा अजिङ्गर थिए ।
सुरुका दिनमा भण्डारीलाई सर्पको जात र त्यसको विषालु पन, आनीबानीको बारेमा केही थाहा थिएन । सर्प विशेषज्ञ डा. देव पाण्डे र सुनिल सापकोटासँग सर्पको बारेमा सिके । यूट्यूब र सर्पसम्बन्धी पुस्तकबाट यस बारेमा जानकारी लिए । दुई वर्ष यता कतिपय स्थानमा उनी डा. पाण्डेलाई लिएर जाने गरेका छन् भने कतिपय ठाउँमा उनी एक्लै पुग्ने गरेका छन् ।